Dowladda Kenya oo ku goodisay in ciidankeeda kala baxeyso Soomaaliya – Somali Top News
Dowladda Kenya oo ku goodisay in ciidankeeda kala baxeyso Soomaaliya
Ergeygii hore ee gaarka ahaa ee Soomaaliya ee QM, Abuukar Armaan ayaa ka hadlay waxa xiisadda cusub ee Soomaaliya iyo Kenya ay uga dhigan tahay joogitaanka ciidamada Kenya ee Soomaaliya.
Dowladda Kenya ayaa sabtidii xiriirka u jartay Soomaaliya, ayada oo u yeeratay safiirkeedii Soomaaliya, islamarkaana soo cayrisay safiirkii Soomaaliya ee Kenya, xilli xiisad diblomaasiyeed ay ka dhex dillaacday labada dal.
Abuukar Armaan oo qoraal kooban soo dhigay twitter, ayaa sheegay in tallaabada Kenya ay ciidamada Kenya ee jooga Soomaaliya ka dhigeyso kuwa duulaan ku ah Soomaaliya.
Kenya ayaa go’aankii ay shalay qaadatay sabab ug dhigtay in Soomaaliya ay xaraashtay xirmooshin shidaal oo ku yaalla “dhul ay leedahay Kenya”, intii uu socday shirka shidaalka Soomaaliya ee London, sida uu sheegay xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibedda Kenya, Macharia Kamau.
← Diplomatic row: Kenya planning withdrawal its forces from Somalia
Al shabaab oo weeraray saldhigga ciidamada Jabuuti ee dagmada Jalalaqsi →
Wararkii ugu dambeeyay Qarax caawa ka dhacay magaalada Muqdisho
Madaxweyne Farmaajo oo booqday deegaano laga saaray Al shabaab